Roberto Segura. Biography uye vanhu vane mukurumbira | Zvazvino Zvinyorwa
Roberto Segura. Biography uye vanhu vane mukurumbira
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Nhoroondo yezvinyorwa
Robert Segura aiva mumwe wevakuru cartoonists of the yendarama zera remakomiki muSpain. Ndakatotaura nezvazvo mune imwe chinyorwa, asi nhasi ndinozvitsaurira izvi kwauri chete. Musiki we Rigoberto Picaporte, bhachuka hombe o Iwo madzishe eAlcorcón uye ane husimbe Pepon, kuchikwereti chake ane akawanda mavara kupfuura isu tine zera ratinoyeuka zvinofadza. Ikoko kunoenda kuongorora.
Uyu muCatalan wekatuni ari kumwe kuneta kwangu pamwe naIbáñez, Escobar, RAF o Purita Campos. Akazvarwa mukati Badalona Musi waFebruary 14, 1927, aive munyori uye munyori wekatuni uye ndewechizvarwa chakajeka chevane makatuni makumi mashanu nemashanu vaive neyakavanzika yekuburitsa imba. Bruguera. Iri mugore iro kana iye odhirowa mabutiro ake ekutanga muvara uye anoshanda akateedzana ne zvetsika mavara uye madingindira, Izvo zvinoratidza apo satirizing rokuSpain nzanga yose 60s uye 70s. Zvino zvakare kusvika 80s pamwe Muchamarcha's, yekupedzisira-inokodzera nguva kudzoreredzwa kwake akajairwa zvikwata zveshamwari zvakatanga nazvo Boka rinofara o Chikwata.
Kubva pakutanga kwekudaidzwa, pazera remakore gumi nemana aive atonyoresa mu Barcelona Chikoro cheUnyanzvi neMhizha. Uye kubva ipapo, mushure mekushandira pamwe mupepanhau, akapinda mumaMacián studio, aive akazvipira kugadzirwa kwekatuni nhevedzano. Icho chaive chakakosha chisina chinhu kuti asvike kuBruguera, uko kwaakasimudzira basa rake rakajeka semuartoon pamwe chete nemazita akanakisa uye makuru mumitambo yeSpanish.
Zvandichiri kufarira zvakanyanya de Segura iri, kunze kwe Kurohwa kwakasimba uye kunoratidza mumadhirowa ake, makuru kugona kuratidza mamiriro ezvinhu ezuva nezuva. Semuenzaniso, mumhuri dzevanyori vake paive nehukama hwepedyo, kuratidzwa kwenzanga iyi yaizovhura muhutongi hwehukama hwepedyo.
Hunhu uye nhevedzano
Rigoberto Picaporte, bhachuka hombe
Es pamwe hunhu hwake hwakayeukwa zvakanyanya. Yakagadzira iyo mukati 1957, payakaonekwa mumagazini Thumbelina. Panjodzi yekuwira mune yakapfava stereotype nekuda kwemamiriro ep protagonist yayo, Segura akapa vese vatambi uye mamiriro ezvinhu nekunyanyisa kwakawanda. Uye kunyangwe iye akarasika nekusingaperi, pese patinoverenga Rigoberto comic isu tinofunga kuti panguva ino zvichamufambira. Mufananidzo wake, uyo wepamoyo wepakati-makore, atova akura kupfuura wechidiki uye asingakwezve, anobatwa nekutsungirira kwake mukuroora wake mukomana, Warbler Cencérrez, uyo aigara akatakura carbine Dona Abelarda, amai vake. Uye saka, chokwadika, pakanga pasina nzira.
Asi Segura, senge chizvarwa ichocho chevanyori vemifananidzo, aifanira kuzvipira kwaari akasiyana akateedzana panguva imwechete kuti uwane raramo nerunyararo rwepfungwa. Kuedza kwacho kwakavapawo a isingaenzaniswi kugona kwekutengeserana. Uye padanho rezvikoro zvikuru zveEuropean, asi pasina kumbobvira awana kuzivikanwa kumwechete uye mukurumbira.
Iwo madzishe eAlcorcón uye ane husimbe Pepon
Yakaonekwa mukati 1959 en Sekuru Vapenyu uye zvinoyeukwawo zvikuru. Zvinogona kutaurwa kuti ivo vachiri muchimiro, nekuti ndiani asina kana kuziva mukwasha senge Pepon? Uye ndeyekuti Pepón ndiyo husiku hwehusiku Arturo Alcorcon, anoshanda muhofisi ane zvemagariro uye zvehunyanzvi zvishuwo, uyo anofanirwa kubata naye, ane husimbe hobo uyo, kuti azviise pamusoro paArturo, ane dziviriro yehanzvadzi yake, iyo inomupomhodza nekumudzivirira zvakanyanya.
Iyo Merry Gang - Iyo Panda - Los Muchamarcha's
Kune vaverengi vadiki, kwaive nematsotsi aya eshamwari uye antics yavo yehujaya uye yehudiki iyo Segura inochinja kuva pamusoro pemakore uye nemagariro mamiriro.
Piluca, musikana wazvino (1959) - Lily (1970)
Zvichida zvandaifarira, zvaive zvisikwa zvake zvakanangana nevateereri vechikadzi vaiverenga magazini saLily. Yakaudza zviitiko uye zvisirizvo zvevasikana vaviri vane hunhu hwakafanana uye trajectory.
Vamwe vatambi vaivewoKaputeni Serafín nemukomana wake wembare Diabolín o Pepe Barrena kana Laurita Bombón, munyori wezvekutungamira.
Segura akafa muPremià de Mar, muna Zvita 2008.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Comics » Roberto Segura. Biography uye vanhu vane mukurumbira
Rafa Melero. Kubvunzana nemunyori weChipatimendi Chekuita